Biafra at 50: Izu a kwụsịrị agha Biafra - BBC News Ìgbò
Biafra at 50: Izu a kwụsịrị agha Biafra
Akụkọ ndị jiri anya hụ agha Biafra, akụkọ ndị nne, ndị bụ ụmụaka mgbe ahụ na ndị ọzọ.
Etu Ọdọụgbọelu Uli siri zọọ ndị Biafra
Ebe a kpọrọ 'Ojukwu Bunker'
Ihe mere n'ọgbakọ maka afọ Biafra
Ndị nwụrụ n' 'Asaba Massacre'
Ihe ụmụ Igbo ama ama kwuru maka Biafra
Ihe ị maghị maka Kaduna Nzeogwu
Nke Adline Okere, Chiagozie Nwonwu, Uche Akolisa na Chimamaka Ihenacho
Ebisara na 12:50 19 Jenụwarị 202012:50 19 Jenụwarị 2020
Daalụ maka etu ụnụ si sonyere anyị kamgbe ụbọchị iri na ise nke Jenụwarị 2020,dịka anyị wetere ụnụ ncheta etu agha Biafra si bie. Ka emesia, ya gaziere ụnụ oo.
'Kaduna Nzeogwu na-ebugharị ogbunigwe n'akpa ya mgbe ọ dị ndụ'
Gere ihe ndị dị omimi nwanne Kaduna Nzeogwu kwuru maka ya n'ihe nkiri a.
Video caption: Biafra at 50": Kaduna Nzeogwu na-ebugharị ogbunigwe n'akpa ya mgbe ọ dị ndụ"Biafra at 50": Kaduna Nzeogwu na-ebugharị ogbunigwe n'akpa ya mgbe ọ dị ndụ"
Ebisara na 12:16 19 Jenụwarị 202012:16 19 Jenụwarị 2020
Ndị ama ama ka na-ekwu maka agha Biafra
Lekwa ihe ndị ama ama kwuru maka agha Biafra.
Video caption: Igbo Celebs: Ha achọrọ Biafra ka ọ bụ ha achọghị Biafra?Igbo Celebs: Ha achọrọ Biafra ka ọ bụ ha achọghị Biafra?
Ebisara na 8:32 18 Jenụwarị 20208:32 18 Jenụwarị 2020
Ụmụaka Biafra: Ihe ndị etobeghi ntoroọbịa hụru oge agha
Gụo ihe ndi bu umuaka oge agha Biafra kwuru naka ya ebe a.
Ebisara na 12:41 17 Jenụwarị 202012:41 17 Jenụwarị 2020
Etu m siri zọọ ndụ n'ụbọchị 'Asaba massacre' Obi Ilomechina Amuwa
Obi Ilomechina Amuwa nke Asaba jiri anya mmiri cheta ndị niile egburu n'Asaba Massacre nke
Jenụwary 15, 1970 mere ya afọ iri ise agha Biafra biri.
Mana ọ bụkwa ụbọchị Okotba 7, n'afọ 1967 ka a kpọtara ndị ọgaranya n'Asaba, wee gbuo ha n'igwe.
Obi Ilomechina Amuwa gwara BBC Igbo ihe anya ya hụrụ n'ụbọchị ahụ na etu o siri zọọ ndụ ya n'ụbọchị ahụ.
Ebisara na 12:12 17 Jenụwarị 202012:12 17 Jenụwarị 2020
Ụmụnwaanyị hụrụ Biafra ekwuola ihe ha gabigara n'oge agha Biafra
Ọtutụ ku nwa aka, ma ndị dị ime kọwara etu ụwa dị mgbe ahụ.
Ha ncha na-asị na ha achọghị iji anya ahụ agha ọzọ.
Ihe ụmụnwaanyị gabigara n'oge agha BiafraImage caption: Ihe ụmụnwaanyị gabigara n'oge agha Biafra
Ebisara na 15:03 15 Jenụwarị 202015:03 15 Jenụwarị 2020
Ndị ma ya kwuru na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ onye tụnyere ọkwa ya, oge ya nakwa ego nna ya maka ọdịmma Igbo bido n' oge agha Biafra rue n'ọnwụ ya.
Emeka bụ nwa a mụrụ n'obi ọgaranya n'abalị anọ nke ọnwa Novemba afọ 1933 n'Ugwu Awusa n'ebe a kpọrọ Zungeru dị na Niger steeti.
Nna ya, Louis Odumegwu Ojukwu, onye Umudim, Nnewi, Anambara steeti bụ nnukwu ọgaranya ka ibe ya n'Afrịka.
Ebisara na 13:27 15 Jenụwarị 202013:27 15 Jenụwarị 2020
Lee eserese na-egosi mpaghara ala Biafra na Naịjirịa
Ebisara na 13:12 15 Jenụwarị 202013:12 15 Jenụwarị 2020
'Enweghi ezinaụlọ Igbo ọbụla na-enweghi onye a tufuru n'ihi agha Biafra'
Broadcast Journalist BBC News Igbo
Lee ihe ndị ji anya ha hụ agha Biafra nwere ikwu maka ihe ha gabigara.
Video caption: Biafra at 50: 'Enweghi ezinaụlọ Igbo ọbụla na-enweghi onye a tufuru n'ihi agha Biafra'Biafra at 50: 'Enweghi ezinaụlọ Igbo ọbụla na-enweghi onye a tufuru n'ihi agha Biafra'
Ebisara na 12:32 15 Jenụwarị 202012:32 15 Jenụwarị 2020
Lee aha ndị nwụrụ n'ihe a kpọrọ 'Asaba Massacre' n'afọ 1967
Ị nụrụ maka mmadụ karịrị nari asaa a gbagburu n'Asaba n'afọ 1967?
Ndịagha Naịjirịa kpọpụtara ndị mmadụ n'obodo ahụ, sị ndị nwaanyị kwụrụ n'akụkụ nakwa ndị nke nwoke.
Ha ji mgbọ egbe wụkasịa ndị nke nwoke ahụ (akụkọ kwuru na ụmụaka dịcha ihe dị ka afọ 12 so na ndị a gbagburu).
Foto a na-egosi aha ndị niile nwụrụ n'Asaba Massacre'Image caption: Foto a na-egosi aha ndị niile nwụrụ n'Asaba Massacre'
Ebisara na 12:09 15 Jenụwarị 202012:09 15 Jenụwarị 2020
BBC Igbo na ndị so lụọ agha Biafra nwere mkparịtaụka maka ọdịmma na ọdịniihu ndị Igbo
Ebisara na 9:32 15 Jenụwarị 20209:32 15 Jenụwarị 2020
Lee ụfọdụ ndị ọcha so ndị Igbo lụọ agha Biafra
Steiner bụ onye mba Jamini, so ndị Igbo lụọ agha Biafra n'afọ 1967 ruo 1970.
N'oge agha a, o mechara si n'ọkwa Kọmpany Kọmanda rigoruo n'ọkwa Lt. Col.
Ọ lụrụ agha a na-anaghị ego ọbụla, dịka Chinua Achebe si dee n'akwụkwọ ya bụ 'There was a Country'.
Rolf Steiner sobu na ndị agha ndị mba Frans a kpọrọ 'French Foreign Legion', tupu ọ bịa sonye ndị agha BiafraImage caption: Rolf Steiner sobu na ndị agha ndị mba Frans a kpọrọ 'French Foreign Legion', tupu ọ bịa sonye ndị agha Biafra
Williams bụ onye mba Wales sokwa lụọ agha Biafra.
O mechara bụrụ 'Major' na ndịagha Biafra.
Ọ bụ onye ọcha ikpeazụ lụrụ Biafra agha hapụrụ ha mgbe agha biri.
Hugh 'Taffy' Williams natara ọzụzụ ya dịka onye agha na mba Saụt Afrịka.Image caption: Hugh 'Taffy' Williams natara ọzụzụ ya dịka onye agha na mba Saụt Afrịka.
Zumbach bụ onye mba Swizaland so lụọ agha Biafra.
Ọ rụrụ dịka onye na-efe ụgbọelu.
O so na ndị bidoro ngalaba a ma dịka Biafra Air Force mgbe ahụ.
Jan Zumbach bụ onye agha mba Poland tupu ọ bịa sonye ndịagha Biafra ka agha Mbaụwa nke abụọ kwụsịrị.Image caption: Jan Zumbach bụ onye agha mba Poland tupu ọ bịa sonye ndịagha Biafra ka agha Mbaụwa nke abụọ kwụsịrị.
Von Rosen bụ onye mba Swidin rụrụ dịka onye na-efe ụgbọelu.
Carl Gustaf von Rosen bụ onye tụnyere Ojukwu alo maka ihe a kpọrọ 'MiniCOIN',Image caption: Carl Gustaf von Rosen bụ onye tụnyere Ojukwu alo maka ihe a kpọrọ 'MiniCOIN',
Ebisara na 8:36 15 Jenụwarị 20208:36 15 Jenụwarị 2020
Taa bụ ụbọchị 15 nke ọnwa Jenụwarị ka agha Biafra biri n'afọ 1970
O meela afọ iri ise agha Biafra biri na mgbe Yakubu Gowon kwuru na "o nweghi onye meriri, e nweghi onye e meriri".Image caption: O meela afọ iri ise agha Biafra biri na mgbe Yakubu Gowon kwuru na "o nweghi onye meriri, e nweghi onye e meriri".
Ebisara na 15:37 14 Jenụwarị 202015:37 14 Jenụwarị 2020
Asi m kwuo, Agha Biafra ebibeghị- Onweka Onwenu
Onyeka OnwenuCopyright: Onyeka Onwenu
Ihe pụtara n'ọgbakọ Nzuko Ụmụnna mere maka ncheta Agha Biafra ka na-ewu.
Otiegwu a ma ama bụ Onyeka Onwenu kwuru na iwe ihe mere ndị Igbo oge Biara ka na-enwe ya.
O kwuru na ụta Agha Biafra adịghịrị ndị Igbo n'ihi na ọ bụ isi onwe ha ka ha na-azọ were gawa ọgụ.
Ọ gara n'ihu taa Naijiria ụta maka agwa ha gbasara ndị Igbo ma tawa ndị Igbo ụta maka ihe Igbo na-agabiga.
“Iwe Naijiria na-ewe m, Iwe Ndi Igbo na-ewe mana maka na onye a jụrụ anaghị ajụ.”
Ebisara na 14:53 14 Jenụwarị 202014:53 14 Jenụwarị 2020
Etu okporoko si bata Naịjirịa
Agha Biafra wetara nnukwu ihe mgbu, agụụ na ọnwụ nye ọtụtụ ndị Igbo. Mana ọ bụghịkwa naanị ihe ọghọm ka ya bụ agha wetara.
Otu ihe bara uru mmadụ nwere ike ikwu n'ọgụ Biafra wetara bụ azụ okporoko.
Gụọ ya n'uju ebe a: https://www.bbc.com/igbo/afirika-51102881
Ebisara na 11:21 14 Jenụwarị 202011:21 14 Jenụwarị 2020
O meela afọ 50 a lụrụ agha Biafra, mana ihe kpatara ya ka na-eme
O bidoro site n'iweghara ọchịchị n'ike nke ụfọdụ ndị agha nke Chukwuma Nzeogwu mere ebe e gburu ụfọdụ ndị ọchịchị.
Iweghara ọchịchị n'ike ọzọ mere ka ọnwa isii gachara nke Muritala Muhammed nọ n'isi ya ebe e gburu ọtụtụ ndị Igbo n'Ugwu Naịjirịa.
Ha gbara ọsọ laa n'ala Igbo, ebe ha nọọ kwubie na ị gara onwe ha kara ha mma.
Mana Goomentị Naịjirịa busoro ha agha dịka ha jụrụ inye ha nnwereonwe ha chọrọ.
Mana ndị hụrụ agha ahụ na-ekwu ọzọ emela.
Video caption: Biafra 50 years after: O meela afọ 50 a lụrụ Biafra, mana ihe kpatara ya ka na-emeBiafra 50 years after: O meela afọ 50 a lụrụ Biafra, mana ihe kpatara ya ka na-eme
Ebisara na 18:42 13 Jenụwarị 202018:42 13 Jenụwarị 2020
Ihe ndị mmadụ na-ekwu na soshal Midia
Ebisara na 16:41 13 Jenụwarị 202016:41 13 Jenụwarị 2020
Gee akụkọ ụwa n'otu nkeji
Ebisara na 15:07 13 Jenụwarị 202015:07 13 Jenụwarị 2020
Lee etu esi kwanyere ndị nwụrụ n'agha Biafra ugwu ikpeazụ
Video caption: Etu e si kwanyere ndị nwụrụ n'agha Biafra uwgu nkeji abụọEtu e si kwanyere ndị nwụrụ n'agha Biafra uwgu nkeji abụọ
Igwe mmadụ pụtara n'emume "Never Again" nke e kpokọbara na Legọs mere ya bụ ncheta.
Ha gbachiri nkiti n'ime nkeji abụọ iji mee ncheta ma kwanyere ndị a uwgu.
Ebisara na 14:33 13 Jenụwarị 202014:33 13 Jenụwarị 2020
'Biafra na-enye anyị ohere ihe nwereike ịbụ' - Ọkaikpe Nkemdilim Izuako
Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n'okwu etinyela ọnụ na nweta Biafra.
Otu n'ime ha bụ Ọkaikpe Nkemdilim Izuako.
Lee okwu ya n'uju ebe a.
Video caption: 'Biafra na-enye anyị ohere ihe nwereike ịbụ' - Ọkaikpe Nkemdilim Izuako'Biafra na-enye anyị ohere ihe nwereike ịbụ' - Ọkaikpe Nkemdilim Izuako